Is-kooxeysi xildhibaanno oo ka billowday Muqdisho | KEYDMEDIA ENGLISH
Is-kooxeysi xildhibaanno oo ka billowday Muqdisho
Dhismaha Is-baheysiyo siyaasadeed, Kutlooyin iyo is-kooxeysi xildhibaanno, ayaa ka billawday caasimadda, xilli ay ceel ku sii dhaceyso rajada dib u doorashada Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kutlooyin iyo is-kooxeysi siyaasadeed, ayaa ka billowday Muqdisho, Xilli ay gabagabo ku dhowdahay doorashada kuraasta Baarlamaanka 11-aad ee JFS, isla-markaana la isku diyaarinayo u dareeridda doorashada Guddoonka Goloyaasha Baarlamaanka iyo Madaxweynaha.
Todobaadkaan, waxaa si weyn caasimadda looga dareemay, abaabulka kulamo waaweyn, oo intooda badan ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin mucaarad ah, kuwaas oo doonaya in ay kulmiyaan xildhibaannada ka soo hor jeeda dib u doorashada Farmaajo.
Sida uu Keydmedia Online, u sheegay mid ka mid ah, xildhibannada hadda soo baxay, ugu yaraan 10 kutladood oo ka aragti duwan Farmaajo, ayaa dhidibada loo taagi doonaa, ka hor bartamaha bisha Ramadaan, kuwaas oo isku imaatin guud yeelan kara bisha April.
Kutlooyinka, waxaa ku jira inta badan xildhibaannada ka soo baxay Galmudug, Jubaland, Puntland iyo reer Waqooyiga, kuwas oo badankood, ku daaban yihiin musharrixiin Madaxweyne iyo xisbiyo siyaasadeed oo mucaarad ku ahaa nidaamkii Farmaajo.
Inta badan shaqsiyaadka u sharaxan xilka ugu sarreeya dalka, ayaa ka mideysan aragtida ah, in meesha laga saaro Farmaajo, [Is beddel doon], hayeeshee, tirada musharixiinta oo aad u badan ayaa kala dhantaaleysa damacooda, haddii aysan is-baheysi sameysan.
Dhanka kale, Farmaajo, ayaa wada qorshe midkaas la ceyn ah, waxaana habeen kasta Madaxtooyada la geeyaa, inta badan xubnaha baarlamaanka 11-aad ka soo galay dhanka NISA, kuwaas oo laga doonayo in ay soo dumaan xildhibaannada dhexdhexaadka ah.
Xildhibaannada u jan-jeera dhanka Farmaajo, waxa ay sameysan doonaan, kutlad mideysa, waxaana kulamo igu sawir iyo dacaayad siyaasadeed ah, la yeelan doona Farmaajo, oo ku fashilmay isku dayo uu ku doonayay inuu kula kulmo inta badan xildhibaannada cusub.
Dhawaan waxaa fashilmay, kulan dhowr u-jeeddo lahaa oo 25-ka bishaan Maarso, la filayay inuu ka dhaco Magaalada Baydhabo, kadib markii ay ka qeyb galkiisa diideen inta badan xildhibaadda reer waqooyiga oo sheegay in ay ogaadeen in Farmaajo u socdo Baydhabo.
Rajada dib u doorashada Farmaajo, ayaa ceel ku sii dhacday, kadib markii ay gacantiisa ka baxeen 16 kursi oo degaan doorashadoodu tahay Gedo, kuwaas oo Axmed Madoobe, maal-maha soo socda u boobi doono shaqsiyaad Farmaajo mucaarad ku ah.